Dheer Journey By Electric skeidgareeyo - Jomo Technology Co., Ltd
Waxaa ka qayb qaataan si heer ay qaadanayso qaar ka mid ah hal-abuurnimo oo halis ah in ay u istaagaan soo baxay meelaha lagu skeidgareeyo korontada, fursadaha sida Fariin iyo in-wheel matoorrada regenerative. The gacanta fog wireless loo maleeyay in laga yaabaa of qayb ka ah heerka daciif ah sida uu sameeyey caag qeyrul iyo waxa uu dareensan yahay in si cadaalad ah oo raqiis ah. Sida caadiga ah, rakaabka ahaa ee lagu skeidgareeyo korontada waa in ay ka qaadaan gudiga waana inuu ku soo bilowdo ka hawlgala on waddada wada maamulka fog samaynta isaga xakameeyo iyo nidaaminaya xawaaraha. Si aad hoos u dhigi waad ku hardiyi keebka weeraryahanka on fog Xararad. In xaaladaha sida, waxa kaliya ee ay tahay in la dhammeeyo waa in ay meel in uu yahay ka tuugaya hoos oo aad ka hortagtaa in ka sii dhibaato xitaa waa in aad ku dhici tagaan. Maxaa ka dhigay fuushan waxa on xitaa crazier oo xiiso dheeraad ah ee xaqa ah in ay taag iyo mid marwalba u tegi kartaa iyada oo aan wax dhibaato ah, si aad u yeelan doontaa in aad safar la meel kasta oo aad rabto. The KV sare, si degdeg ahskeidgareeyo korontadaeryi doonaa. The giraangiraha on skeidgareeyo this korontada waxaa laga sameeyay caag kaas oo loo isticmaali karaa on nooc kasta oo dhul.
Iyo noocyo kala duwan oo sii kordhaysa ee rullebrett korontada tout ay xawaaraha (qaar ka mid ah wax xunna ku samayn doonaa in ka badan 20 miles per saac), dardargelinta degdeg ah, tiro ka mid ah hababka saaran, iyo sturdiness markii saaray by tallaabo socdeen ay ka buuxaan ama qaaday meel jidka ka baxsan. Sidaas darteed haddii aad tahay qof culus kuwaas oo degtaa kaliya ee ugu fudud, ka dibna KOOWHEEL rullebrett korontada kulmi doona dalabaadka aad. Sidaas daraaddeed, dayactirka in maanka, aan lahaa guud ahaan ku faraxsanahay in aan arko marka Koowheel ee korontada jiilka skeidgareeyo labaad Kooboard waxaa kor u xaqiijiyay. The ugu horeysay lagu skeidgareeyo korontada si loo fuliyo qaababka ilaalinta ammaanka badan ee rakaabka ahaa.
Dhab ahaantii, jejebiyey waa nidaam regenerative in kharash batteriga. Waxaan nahay skeidgareeyo korontadageeks. Waayo, tobanaan malaayiin dadka lugaynaya, skeidgareeyo waa xiiso leh iyo doorasho macquul ah uyeelay masaafo dheer si dhakhso ah oo ka Jahwareer gaadiidka gridlocked ama ciriiri iyo hawlqabad la'aan gaadiidka dadweynaha sii iska. Laakiin, waxaa jira yeellay ah in ay ka biyodiiday kasta, iyo in kiiska si hufan halkan. Ka dib faqri ku dhow 200 oo saacadood cilmi baarista ee wata magac oo lagu daydo ugu waxtarka badan ee lagu iibiyo suuqa, waxaan soo iibsaday ugu sareeya 10 looxyada suuqa saxda ah la joogo oo iyaga khuseeya-ilaa-dhinac baaro in ay baadhaan baxay oo e-skeidgareeyo runtii xeerarka oo dhan oo iyaga ka mid! Haddii aad rabto in aad ka heli mid ka wanaagsan, Shiinaha waa meesha si loo eego. Halka barnaamij waa meel si ay u xakameyso fuulitaanka of waxyeello inclines, fuushanba waa in la fahmo awoodda guddiga this siin karaan waa in la ixtiraamo si loogu isticmaalo ilaaliyo. Si kastaba ha ahaatee, waxaa la gaaray waqtigii oo dhan qorshe aad u wanaagsan si loo xaqiijiyo xeerarka hooyo iyo xeerarka ku saabsan fuushan aad guddiga, haddii aad safar la ayna u oggolaadaan in waqti badan oo dheeraad ah oo ammaanka haddii aad safar la socoto aad E-skeidgareeyo doono. Waxay qaadataa oo keliya afartan iyo shan daqiiqo oo ay ku kici guddiga la xeedho ee deg deg ah.
waqti Post: Feb-23-2018